သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးပြီးသွားပေမဲ့ သူတန်ဖိုးထားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာလေးကို မလုပ်လိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အောင်ထက် – Nyi Ma Lay
သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးပြီးသွားပေမဲ့ သူတန်ဖိုးထားပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာလေးကို မလုပ်လိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အောင်ထက်
ပရိသတ် ကြီးရေ အိမ်မက်ဆုံရာ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှ တစ်ဆင့် နာမည်ကြီး လူကြိုက် များလာ ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက် ဟာ လက်ရှိ မှာလဲ အောင်မြင်ကျော်ကြား နေဆဲ ပါပဲနော်။ အောင်ထက် သီဆို ထားတဲ့ သီချင်း တွေဟာလည်း ယောက်ျားလေး ပရိသတ် တွေကြားမှာ အတော်လေး ရေပန်းစား ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေ အနေ တွေကြောင့် သီချင်းသီဆိုမူ့ တွေ ရပ်နား ထားတဲ့ အောင်ထက် ဟာ အခု ချိန်မှာလဲ ဂီတ အနုပညာ အလုပ်တွေကို အနည်း အကျဉ်းပဲ လုပ်ကိုင် လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ မှာတော့ အဆိုတော် အောင်ထက် ဟာ ပရိသတ် တွေကို ရင်ဖွင့် လိုက်ပါတယ်။
ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အချိန်အခါမှာ အဆိုတော် အောင်ထက် ဟာ သူ တန်ဖိုးထားရတဲ့ မန်းတောင် ရိပ်ခို ဆိုတဲ့ သင်္ကြန် သီချင်းကြီး ကို မဆိုဖြစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ် တွေကို ပြောပြ လိုက်တာပါ။ ဒါအပြင် ပရိသတ် တွေကိုလဲ မေးခွန်း ထုတ်ထားပါသေးတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောင်ထက် ရဲ့ လူမူ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ ” သြော် သင်္ကြန်ပွဲတော် ကြီးပြီးသွားပြီ ကျွန်တော်တို့ အလွန် တန်ဖိုးထားသော မန်းတောင် ရိပ်ခို သီချင်းကို တောင် မဆိုဖြစ်လိုက်ဘူး မိတ်ဆွေတို့ရော??? အားလုံးသော မိသားစုများ မိတ်ဆွေများ နှစ်သစ်မှာ ဘေးကပ် ဆိုးမှန်သမျှ ကင်းစင် ပပျောက်ပြီး ကောင်းခြင်းများစွာ ရရှိ ကြပါစေလို့ ကောင်းသော ဆုတောင်းမှု ပြုလိုက် ပါတယ်ဗျာ “လို့ ရေးသား ထားတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
ပရိသတ် ကြီးရေ အဆိုတော် အောင်ထက် လိုပဲ သင်္ကြန်မှာ မလုပ် ဖြစ်လိုက်တဲ့ အရာလေးတွေ ရှိရင် ကောမန့်မှာ ရေးသားသွား ပေးခဲ့ အုန်းနော်။ အဆုံးထိ ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ အိမ္မက္ဆုံရာ သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္ မ်ားလာ ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ ဟာ လက္ရွိ မွာလဲ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ေနဆဲ ပါပဲေနာ္။ ေအာင္ထက္ သီဆို ထားတဲ့ သီခ်င္း ေတြဟာလည္း ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ ေတြၾကားမွာ အေတာ္ေလး ေရပန္းစား ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိ အေၿခ အေန ေတြေၾကာင့္ သီခ်င္းသီဆိုမူ႔ ေတြ ရပ္နား ထားတဲ့ ေအာင္ထက္ ဟာ အခု ခ်ိန္မွာလဲ ဂီတ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို အနည္း အက်ဥ္းပဲ လုပ္ကိုင္ လၽွက္ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ ဟာ ပရိသတ္ ေတြကို ရင္ဖြင့္ လိုက္ပါတယ္။
ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္အခါမွာ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ ဟာ သူ တန္ဖိုးထားရတဲ့ မန္းေတာင္ ရိပ္ခို ဆိုတဲ့ သၾကၤန္ သီခ်င္းႀကီး ကို မဆိုျဖစ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို ပရိသတ္ ေတြကို ေျပာၿပ လိုက္တာပါ။ ဒါအျပင္ ပရိသတ္ ေတြကိုလဲ ေမးခြန္း ထုတ္ထားပါေသးတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ထက္ ရဲ့ လူမူ႔ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ” ေၾသာ္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ႀကီးၿပီးသြားၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္ တန္ဖိုးထားေသာ မန္းေတာင္ ရိပ္ခို သီခ်င္းကို ေတာင္ မဆိုျဖစ္လိုက္ဘူး မိတ္ေဆြတို႔ေရာ??? အားလုံးေသာ မိသားစုမ်ား မိတ္ေဆြမ်ား ႏွစ္သစ္မွာ ေဘးကပ္ ဆိုးမွန္သမၽွ ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ၿပီး ေကာင္းျခင္းမ်ားစြာ ရရွိ ၾကပါေစလို႔ ေကာင္းေသာ ဆုေတာင္းမႈ ျပဳလိုက္ ပါတယ္ဗ်ာ “လို႔ ေရးသား ထားတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ လိုပဲ သၾကၤန္မွာ မလုပ္ ျဖစ္လိုက္တဲ့ အရာေလးေတြ ရွိရင္ ေကာမန႔္မွာ ေရးသားသြား ေပးခဲ့ အုန္းေနာ္။ အဆုံးထိ ဖတ္ရႈ႔ေပးတဲ့ စာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္။
Previous post စမိုင်းလ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ဟိုတယ်ကြီးမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုလည်း မုန့်ဖိုးပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်လေးဆွေ
Next post နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတစ်ယောက်အလားထင်ရလောက်အောင် လုံးဝမမှတ်မိတော့တဲ့ အထိကို ဖြစ်သွားစေမဲ့ ပုံလေးတွေချပြလာတဲ့ ချယ်ရီသင်း